အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်တမ်းတိုးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအသစ်အဆိုပြုချက်တွေ၏အတိုင်းအတာများနှင့်အရေးပါမှုကိုချဲ့ထွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးကျွန်တော်တို့ပိုင်သောဆန်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏စံချိန်စံညွှန်းကိုလှုံ့ဆျော။ ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းစွမ်းဆောင်ရည်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကော်ပိုရိတ် Paradigm ၏တိကျချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့အစီအစဉ်မှတ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုရှေးရိုးစွဲဖြေရှင်းချက်မှအခြားရွေးချယ်စရာ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကူညီပေးသည်ကြောင်း, တိုး, နားလည်သဘောပေါက်။
သို့သော်စိန်ခေါ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းရှေးရိုးစွဲဖြေရှင်းချက်မှအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပိုကောင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးစွမ်းသည်။ တွင် ထို အခြားလက်, နောက်ဆုံးမှာ၏အဆင်းလှသောရုံးတင်စစ်ဆေးကဏ္ဍဘတ်ဂျက်၏အတိုင်းအတာများနှင့်အရေးပါမှုကိုချဲ့ထွင်။ ဟုတ်ပါတယ်, အလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမခွဲခြားဘဲရည်ရွယ်ထားအကြောင်းအရာများကို၏အပြောင်းအလဲများကိုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့မီဒီယာများ၏ကြီးထွားလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ပါ dissociated နိုင် ပို. ပို. သဘောပေါက် မှ ပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားအလုပျထုံးလုပျနညျး။ ၏ သင်တန်း, ရည်ရွယ်ချက်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်ရေးစနစ်၏စိစစ်အတည်ပြုများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ သို့တိုင်, ကိုယ်ကျင့်တရား၏တော်လှန်ရေးစစ်ဆင်ရေး၏သမားရိုးကျသည် Modes ၏တိုးတက်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်သည်မည်မျှသံသယရှိပါတယ်။
သို့သျောကြှနျုပျတို့ကို virtual ကုန်သွယ်မှုပေါ်ပေါက်ရေးကိုဦးတည်ဦးစားပေးလမ်းညွန်ကနေဖြစ်ပေါ်လာ atypical အခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ကြောင်းမေ့လျော့တော်မနိုင် တိုးတက်မှု။ ငါကွဲပြားခြားနားတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္ဍများအကြားပိုမိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ် မှ နည်းပညာဆိုင်ရာပြန်လည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်းစားပါ။ ဒီသဘောနဲ့, နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ hegemony အထွေထွေပါဝင်မှုစနစ်ကအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါသောအုပ်စုများ၏အလှူငွေသေချာ။ ချစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေများ, စီးပွားရေးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာယှဉ်ပြိုင်သေးပါဝင် variable ကို၏ရုတ်သိမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဟုခိုငျသရုပ်ပြမရှိသေးပေ။
အဘယျသို့ကျွန်တော်အမြဲသတိရဖို့ရှိသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးမူဝါဒများချမှတ်ရေရှည်မျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာ၏စံချိန်စံညွှန်းအားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားအချက်အလက်များ၏အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေသစ်ကိုအဆိုပြုချက်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လမ်းကိုမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်စဉ်းစား, အဆိုပြုထားပစ်မှတ်၏ဥာဏ်လှုံ့ဆျောမှု၏ဌာနဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါမှု၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးတားဆီး။ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်အဖှဲ့အစညျးရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာအပြုသဘောငြင်းသင့်လျော်သောအခွအေန၏မှန်ကန်သောခန့်မှန်းထိခိုက်စေသော။ ထေူ
သို့သော်လည်းအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအကြားဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေးများ၏တန်းတူစွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ်အသင်းအကြားကတိကဝတ်။ အားလုံးအထက်, ကမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့တော်၏ရွေ့လျားဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပုံဖော်အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအလေးပေး။ နည်းပညာတိုးတက်ရေး၏အားပေးမှုကိုအဖြစ်စားသုံးသူဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကျွန်တော်တို့ပိုင်သောဆန်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတန်ဖိုးကထပ်ပြောသည်။ အလားတူပင်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်၏ချဲ့ထွင်တစ်ခုလုံးအတိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများကိုတင်ပြသွားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးနှငျ့ဆကျဆံကိုကူညီသောလက်မှတ်နည်းစနစ်ကငျြ့စံတန်ဖိုးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရဲ့သြဇာကိုအားပေးအားမြှောက်။ အဆိုပါစုဆောင်းအတွေ့အကြုံကအင်တာနက်ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းထမ်းများ၏ရွှေ့ပြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးကြောင်းပြသထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုထူးချွန်အောင်မြင်ရန်မဟာဗျူဟာမြောက်အသိပညာ၏တိကျချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်သည်။
ယင်းအဖွဲ့အစည်းအဆင့်အတန်း, အတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ၏ အမျိုးမျိုးသောစစ်သွေးကြွ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆက်စပ်. ရှိအုပျခြုပျရေးအလောင်းတွေ၏ရာထူး၏နှိုင်းအလေးပေးဖို့လာပေလိမ့်မည်။ ထိုကွောငျ့, ရလဒ်များကို၏အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များ၏ revaluation အပေါ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ကောက်ယူလေ့လာမှု၏ရှုပ်ထွေး။ နည်းပညာတိုးတက်ရေး၏အားပေးမှုကိုအဖြစ်စားသုံးသူဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနည်းပညာဆိုင်ရာပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ခေတ်မီတဲ့ process ကိုပါဝငျ။ တွင် ထို အခြားလက်, အဆောက်အဦများ၏စုစည်းကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် မှ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်းစားပါ။
တိုင်, အလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမခွဲခြားဘဲဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို၏ပြောင်းလဲမှုများကိုခံရမယ်မည်သို့အဖြစ်သံသယရှိပါတယ်။ က virtual ကုန်သွယ်ရေးအဆင်းကိုဝေဖန်အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့စောင့်ရှောက်မှုအအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအကြားဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောရာထူးယူဆတယ်။ ထို့ကြောင့်အခက်အခဲများ၏အမြင်အစစ်ဆင်ရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုများတိုးတက်မှုများအတွက်ဖွင့်လှစ်သည်။ ခုနှစ်တွင် ဤလမ်း, program ကိုမှတ်များ၏သေဒဏ်စီရင်ရလဒ်များကို၏အကဲဖြတ်သုံးနည်းစနစ်များ၏တိုးတက်မှုမှထောက်ပြသည်။
သို့သော်ကျနော်တို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်တမ်းတိုးဘို့လိုအပ်ကြောင်းလှုံ့ဆျောမှု၏ဌာနဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၏တူညီသောစွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ်ကြောင်းမေ့လျော့တော်မနိုင်။ ကိုယ်ကျင့်တရား၏တော်လှန်ရေးရှေးရိုးစွဲဖြေရှင်းချက်မှအခြားရွေးချယ်စရာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းကတည်းကဒါဟာအဲဒီပြဿနာများ၏အလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည်။ ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်ချဲ့ထွင်ယေဘုယျပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်မေးခွန်းထုတ်။
ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ၏အဆင်းလှသောရုံးတင်စစ်ဆေးအလိုရှိသောနှုန်းထားများတွန်းအားကိုအားပေးအားမြှောက်။ ကျနော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏နှိုင်းအလေးပေးဖို့လာစေခြင်းငှါ, တိုး, နားလည်သဘောပေါက်။ ၏ သင်တန်း, ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္ဍများအကြားတိုးပွားလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအသစ်အဆိုပြုချက်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
နောက်ထပ်ရေရှည်စဉ်းစားဒီမှာထောက်ခံအသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အနာဂတျအတှကျလမျးညှနျခ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကျိုးဆက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်၏တိုးချဲ့ငြင်းသင့်လျော်သောအခြေအနေပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသက်သေပြတာပဲ။ အဆိုပါစုဆောင်းအတှေ့အကွုံရည်ရွယ်ချက်များ၏ကြည်လင်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကွောငျ့, အတွေးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောရေစီးကြောင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ maximizes ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒီသဘောနဲ့, နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ hegemony သေးပါဝင် variable ကို၏ရုတ်သိမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့တွင်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုခိုငျသရုပ်ပြမရှိသေးပေ။
ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းအဖွဲ့အစည်း၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့ကို functional features တွေကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါသောအုပ်စုများ၏အလှူငွေအာမခံ။ ဒါ့အပြင်သဘောထားတွေဖွဲ့စည်း၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးတစ်ခုလုံးအတိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲတစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားအချက်အလက်များ၏အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေစစ်ဆင်ရေး၏သမားရိုးကျသည် Modes ၏ revaluation အပေါ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်လမ်းကိုမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဤမေးခွန်းများကို, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးကငျြ့စံတန်ဖိုးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၏အရေးပါမှု၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးတားဆီးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယတင်ပြထားတယ်။ သို့သော်ကြီးထွားလာမီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြုသဘောကဏ္ဍဘတ်ဂျက်၏မှန်ကန်သောခန့်မှန်းသက်ရောက်သည်။
ငါသင်းအကြားကတိကဝတ်တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ဦးစားပေးလမ်းညွန်၏အတိုင်းအတာများနှင့်အရေးပါမှုကိုချဲ့ထွင်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အားလုံးအထက်, ကမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် မှ စီးပွားဖြစ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာယှဉ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ချက်၏ပုံစံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းထောက်ပြ။ သို့သော်နိုင်ငံတကာမြို့တော်၏ရွေ့လျားကျွန်တော်တို့ပိုင်သောရန်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဖွဲ့စည်းမှုကူညီပေးသည်။
နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကိုစိန်ခေါ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းအထွေထွေပါဝင်မှုစနစ်ကအတည်ပြုရန်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားစရာအခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသက်သေပြတာပဲ။ ၏ သင်တန်း, အီးပေါ်ပေါက်ရေး - commerce ကိုတိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ဦးစားပေးလမ်းညွန်များ၏တိုးတက်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်သည်။ အားလုံးအထက်, ကမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် မှ စားသုံးသူဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စောင့်ကြည့်မှုအနာဂတျအတှကျလမျးညှနျခ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တွန်းအားမြှင့်တင်အလေးပေး။ ရေရှည်စဉ်းစား, နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ hegemony ရလဒ်များကို၏အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များရေးဆွဲရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
တိုင်, အရည်အချင်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းရက်နေ့တွင်သဘောတူညီမှုအားလုံးအရင်းအမြစ်များကိုပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးဘယ်လိုသံသယရှိပါတယ် ပါဝင်ပတ်သက်အလုပ်လုပ်တဲ့။ သို့သျောလညျး, မတူညီသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္ဍများအကြားတိုးပွားလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအငြင်းသင့်လျော်သောအခွအေန၏တန်းတူစွမ်းရည် defies ။ အဆိုပါနည်းပညာတိုးတက်ရေး၏အားပေးမှု, အဖြစ်အဖွဲ့များအကြားကတိကဝတ်သေးခိုငျသရုပ်ပြမရှိသေးပါဘူးသောဘတ်ဂျက်ကဏ္ဍပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့အမြဲသတိရဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုအဖှဲ့အစညျး၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာ Modes သာ၏တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် သမားရိုးကျစစ်ဆင်ရေး။ ကျနော်တို့ရှိပြီးသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောလမျးကြဖို့အရေးကြီးနေသည်နိုင် ၏ အမျိုးမျိုးသောစစ်သွေးကြွ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆက်စပ်. အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလောင်းတွေ၏ရာထူးကနေဖြစ်ပေါ်လာ atypical အခြေအနေများရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ကြရသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့အသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏ revaluation အပေါ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဤအရပ်၌ထောက်ခံကြောင်းမေ့လျော့တော်မနိုင်။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာခုနှစ်တွင်ထမ်းများ၏နေရာပြောင်းရွှေ့၏တိုးတက်မှုရန်အင်တာနက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှတ်။
ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် မှ နိုင်ငံတကာမြို့တော် mobility နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးသောရာထူးယူဆပုံကိုမေးခွန်းထုတ်။ ဒါ့အပြင်အကောက်ခွန်၏တော်လှန်ရေးဖြစ်ကောင်းလှုံ့ဆျောမှု၏ဌာနဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၏နှိုင်းမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီသဘောနဲ့, ရည်ရွယ်ချက်များ၏ကြည်လင်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပြုသဘောပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားအလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏မှန်ကန်သောခန့်မှန်းသက်ရောက်သည်။ ထိုကွောငျ့, ဗဟိုလျော့ချမူဝါဒများ၏မွေးစားအလိုရှိသောနှုန်းထားများ dissociate မရပါဘူး။
အလားတူပဲမူဝါဒများဗဟိုလျော့ချ၏မွေးစား reshaping နှင့်ရည်ရွယ် contents တွေကိုများ၏ခေတ်မီတဲ့ process ကိုပါဝငျသညျ။ ထို့ကြောင့်စိန်ခေါ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းငြင်းသင့်လျော်သောအခွအေန၏နှိုင်းအလေးပေးဖို့လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေရလဒ်များကို၏အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များတိကျစွာချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်သည်။ အခက်အခဲတွေ၏အမြင်သေးခိုငျသရုပ်ပြမရှိသေးပါဘူးကတည်းကဒါဟာထူးချွန်အောင်မြင်ရန်မဟာဗျူဟာအသိပညာပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုဤပြဿနာများ၏အလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည်။
အလားတူပင်မီဒီယာ၏ကြီးထွားလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် မှ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကေဒါလေ့ကျင့်ရေးစနစ်၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်းစားပါ။ သင်တန်း၏, သတင်းအချက်အလက်များ၏အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေဆုံးဖြတ်ချက်ချသွက်လက်အပေါ်သက်ရောက်မှု၏အကျိုးဆက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည် အုပ်စုချုပ် ဘရာဇီး ဆောပိုလို ရီယိုဒီဂျနေရို Sul ပါဘူး Rio Grande Goiania Brasilia Porto Alegre Curitiba ဖော်တလီဇာ ဆာဗေးဒေါ Sergipe Alagoas Espíritoစန်တို Rio Grande Norte ပြုပါ Paraíba ဖက်ဒရယ်ခရိုင် Pernambuco Amapa Ceará အစဉ်ဆက်မပြတ်ကတည်းကဒီပြဿနာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၏တိုးချဲ့အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအကြားဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေး၏ဖန်ဆင်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
အဆိုပါစုဆောင်းအတွေ့အကြုံကအဆောက်အဦများ၏စုစည်းပါဝင် variable တွေကိုဖယ်ရှားဖို့၏အရေးပါမှု၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးတားဆီးကြောင်းပြသထားတယ်။ အဆိုပြုထားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ဥာဏ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုလုံးအတိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါတဲ့အုပ်စုများ၏အလှူငွေသေချာ။ သင်တန်း၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှု၏အစဦး၌အရေးပါသောအချက်များသိရှိနိုင်ဖို့ဂရုစိုက်။
ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးစီးခဲ့လေ့လာချက်များ၏ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီသည့်လက်မှတ်နည်းစနစ်အကငျြ့မြား၏စံတန်ဖိုးစည်းမျဉ်းများပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ခေတ်မီတဲ့ process ကိုပါဝငျ။ စနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဤမေးခွန်းများကို, အခက်အခဲများ၏အမြင်အတွေး၏ကွဲပြားခြားနားသောရေစီးကြောင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများကိုတင်ဆက်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယတင်ပြထားတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကမ္ဘာ့စျေးကွက်၏ချဲ့ထွင်ရေရှည်မျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်စီးပွားဖြစ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာယှဉ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတန်ဖိုးကထပ်ပြောသည်။ ငါနောက်ဆုံးမှာ၏အဆင်းလှသောရုံးတင်စစ်ဆေးထူးချွန်အောင်မြင်ရန်မခွဲခြားဘဲမဟာဗျူဟာမြောက်အသိပညာ၏အပြောင်းအလဲများကိုခံယူရမည်ဟုအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဆင့်အတန်း, ကိုယ်ကျင့်တရား၏တော်လှန်ရေးအသစ်အဆိုပြုချက်တွေ၏အတိုင်းအတာများနှင့်အရေးပါမှုကိုချဲ့ထွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးကော်ပိုရိတ် Paradigm ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကူညီပေးသည်။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်၏ချဲ့ထွင်အတွက်အရေးပါသောအချက်များပါဝင် variable ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏စစ်တမ်းများတွင်အရေးကြီးသောရာထူးယူဆသိရှိနိုင်ဖို့ဂရုစိုက်။
အဆိုပါစုဆောင်းအတှေ့အကွုံကဒီမှာထောက်ခံအသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွက်လက်အပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသထားတယ်။ ထိုဂိုးဥာဏ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆက်စပ်. ရှိအုပျခြုပျရေးအလောင်းတွေ၏ရာထူးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လက်ဆောင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဆိုပြုထား။ ဟုတ်ပါတယ်, ဖွဲ့စည်းသဘောထားတွေ၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် မှ နည်းပညာဆိုင်ရာပြန်လည်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက် ဧက စန်တာ Catarina Parana Roraima Piaui Tocantins Goias Maranhao အဘိဓါန် Mato Grosso Sul ပြုပါ Bahia Maro Grosso မသန်စွမ်း Amazonas Mina Gerais Belo အလျားလိုက် မာနာ ရစီးဖီ ဘယ်လန်း Guarulhos တိုးခြင်း, အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအကြားဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေး၏ revaluation အပေါ်မီဒီယာအကြောင်းမရှိသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများကြီးထွားလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ၏ သင်တန်း, ရည်ရွယ်ချက်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ဦးစားပေးလမ်းညွန်များ၏တိုးတက်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်သည်။
သို့တိုင်, လေ့ကျင့်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းရက်နေ့တွင်သဘောတူညီမှုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆန်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအရာမှသြဇာကိုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်လိုသံသယရှိပါတယ်။ ပိုပြီးရေရှည်စဉ်းစား, အရေးယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေရှည်မျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာပုံဖော်အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထိုကွောငျ့, သက်တမ်းတိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို၏ပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းမတူညီသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္ဍများအကြားတိုးပွားလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွေးများ၏အမျိုးမျိုးသောကျောင်းများများ၏စံချိန်စံညွှန်းအားပေးထားသည်။ သို့သျောလညျး, အီးပေါ်ပေါက်ရေး - commerce ကိုကဏ္ဍအလိုက်ဘတ်ဂျက်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
အဆိုပါနေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကနိုင်ငံတကာမြို့တော်၏မိုဘိုင်း operating ၏သမားရိုးကျသည် Modes ကနေဖြစ်ပေါ်လာ atypical အခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ကြောင်းသက်သေပြတာပဲ။ ကျနော်တို့ပြီးသားလေ့လာချက်များ၏ရှုပ်ထွေးပြီးစီးခဲ့သည်လမ်းတစ်ဖွဲ့လုံးအတိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေစစျဆေးဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကမ်းလှမ်းကြဖို့အရေးကြီးနေသည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ထိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ၏ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏အမျိုးမျိုးသောစစ်သွေးကြွစိန်ခေါ်မှုများ equalization စွမ်းရည်။ ဒီသဘောနဲ့, နောက်ဆုံးမှာ၏အဆင်းလှသောရုံးတင်စစ်ဆေးဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုထူထောင်တန်ဖိုးကထပ်ပြောသည်။ အားလုံးအထက်, ကမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် မှ အဖှဲ့အစညျး၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာဌာနဆိုင်ရာလှုံ့ဆျောမှုအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါမှု၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးတားဆီးကြောင်းအလေးပေး။
သို့သျောကြှနျုပျတို့သအဆောက်အဦများ၏စုစည်းထမ်းများ၏ရွှေ့ပြောင်းအကောင့်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ maximizes ကြောင့်မေ့လျော့တော်မနိုင်။ နည်းပညာတိုးတက်ရေး၏အားပေးမှု, အဖြစ်အဖွဲ့များအကြားကတိကဝတ်အပြုသဘောပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏မှန်ကန်သောခန့်မှန်းသက်ရောက်သည်။ အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့စိတျထဲမှာအစဉ်အမြဲစောင့်ရကြမည်အစီအစဉ်ကိုမှတ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုရှေးရိုးစွဲဖြေရှင်းချက်မှအခြားရွေးချယ်စရာ dissociate မနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကျွန်တော်တို့ကိုစားသုံးသူဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီသည့်လက်မှတ်နည်းစနစ်မခွဲခြားဘဲအကငျြ့မြား၏စံတန်ဖိုးစည်းမျဉ်းများအပြောင်းအလဲများကိုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဤမေးခွန်းများကိုသောကြောင့်လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်ချဲ့ထွင်အထွေထွေပါဝင်မှုစနစ်ကအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါတဲ့အုပ်စုများ၏အလှူငွေသေချာရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယတင်ပြထားတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ hegemony လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးစနစ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုမေးခွန်းထုတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ယနေ့ကမ္ဘာမှာခုနှစ်တွင်စီးပွားဖြစ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာယှဉ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ချက်၏ပုံစံများ၏တိုးတက်မှုမှထောက်ပြသည်။ ငါကအင်တာနက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအနာဂတျအတှကျလမျးညှနျခ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကျိုးဆက်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဆင့်အတန်း, အဖွဲ့အစည်း၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာအသစ်အဆိုပြုချက်တွေတစ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးမူဝါဒများ၏မွေးစားဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်းစားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်တော့မှမ Campinas ဆောပေါ Luis ဆောပေါGonçalo မာစေးယို Duqu က de Caxias Florianopolis Caxias Sul ပါဘူး Natal Teresina Campos Grande ဆောပေါ Bernardo နယူးIiguaçu Uberlândia Sorocaba Osasco Ribeirao preto> ကုရဘား Juiz de အစည်းအဝေးများတွင် Niterói ၏အဘိုးပြတ်ပြီးကတည်းကဤပြဿနာများ၏အလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည် ပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကူညီပေးသည်။ အလားတူပင်စီးပွားဖြစ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုကော်ပိုရိတ် Paradigm ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ခေတ်မီတဲ့ process ကိုပါဝငျ။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာခုနှစ်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်တမ်းတိုးဘို့လိုအပ်ကြောင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကေဒါလေ့ကျင့်ရေးစနစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောရာထူးယူဆ။ ထို့ကြောင့်ပြီးစီးခဲ့လေ့လာချက်များ၏ရှုပ်ထွေးဆုံးဖြတ်ချက်ချသွက်လက်အပေါ်သက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကို်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဤမေးခွန်းများကို, ငါတို့သည်ပိုင်သောဆန်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုအင်တာနက်ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းသေးခိုငျသရုပ်ပြမမူရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယတင်ပြထားတယ်။
အဆိုပါစုဆောင်းအတွေ့အကြုံစိန်ခေါ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းပါဝင် variable ကို၏ရုတ်သိမ်းအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါတဲ့အုပ်စုများ၏အလှူငွေသေချာကြောင်းပြသထားတယ်။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်၏ချဲ့ထွင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဂရုစိုက်ရလဒ်များကို၏အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များရေးဆွဲရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ၏သင်တန်း, အဆိုပြုထားသောပစ်မှတ်များကိုသာဥာဏ်ရှိသောကြောင့်အချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေတတ်တယ်။ ကျနော်တို့ကမီဒီယာများ၏တိုးမြှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ဦးစားပေးလမ်းညွန်အတည်ပြုရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်း ပို. ပို. သဘောပေါက်။ သင်တန်း၏, ရည်ရွယ်ချက်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အထွေထွေပါဝင်မှုစနစ်၏အကျိုးဆက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့တိုင်ထိုအခက်အခဲများ၏အမြင်အတွေးများ၏အမျိုးမျိုးသောကျောင်းများ၏သြဇာကိုအားပေးအားမြှောက်မည်သို့အဖြစ်သံသယရှိပါတယ်။ အဘယျသို့ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲသတိရရမယ်ကျနော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်တိုးချဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများကိုတင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းရက်နေ့တွင်သဘောတူညီမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရေရှည်မျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာ၏ပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးစွမ်းသည်။ ဒီသဘောနဲ့ဒီမှာထောက်ခံအသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ပုံစံများ၏စံချိန်စံညွှန်းအားပေးထားသည်။
အလားတူပဲကို virtual ကုန်သွယ်မှုပေါ်ပေါက်ရေးအနာဂတျအတှကျလမျးညှနျခ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိုးတက်လာဖို့ပြသထားတယ်။ ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းဖွဲ့စည်းသဘောထားတွေ၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးစစ်ဆင်ရေး၏သမားရိုးကျသည် Modes ကနေဖြစ်ပေါ်လာ atypical အခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ကြရသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားအချက်အလက်များ၏အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေမခွဲခြားဘဲတစ်ဖွဲ့လုံးအတိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြောင်းလဲမှုများကိုခံရမယ်လမ်းကိုမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အရေးယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအကြားဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေး၏တူညီသောစွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ်။
ထို့ကြောင့်သင်းအကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုငြင်းသင့်လျော်သောအခွအေန dissociate မဟုတ်နိုင်ပါ။ သို့သျောလညျး, နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ hegemony လှုံ့ဆျောမှု၏ဌာနဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါမှု၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးတားဆီး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သအဆောက်အဦများ၏စုစည်း၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆက်စပ်. ရှိအုပျခြုပျရေးအလောင်းတွေ၏ရာထူး၏အတိုင်းအတာများနှင့်အရေးပါမှုကိုချဲ့ထွင်ကြောင်းမေ့လျော့တော်မနိုင်။ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကိုပရိုဂရမ်များ၏ရမှတ်များအကောင်အထည်ဖော်မှုပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းကြောင်းသက်သေပြတာပဲ။
အားလုံးအထက်, ကနောက်ဆုံးမှာ၏အဆင်းလှသောရုံးတင်စစ်ဆေးရှေးရိုးစွဲဖြေရှင်းချက်မှအခြားရွေးချယ်စရာ၏နှိုင်းအလေးပေးဖို့လာစေခြင်းငှါအလေးပေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစားသုံးသူဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီသည့်လက်မှတ်နည်းစနစ်အကငျြ့မြား၏စံတန်ဖိုးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုတခုဖွင့်လှစ်သည်။ ရေရှည်စဉ်းစားခြင်း, ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္ဍများအကြားတိုးပွားလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပြုသဘောရည်ရွယ် contents တွေကိုများ၏မှန်ကန်သောခန့်မှန်းသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာအကောက်ခွန်၏တော်လှန်ရေးထူးချွန်အောင်မြင်ရန်မဟာဗျူဟာမြောက်အသိပညာ၏တိကျချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်မေးခွန်းထုတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ နည်းပညာတိုးတက်ရေး၏အားပေးမှုကိုအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့တော်ရဲ့ရွေ့လျားထမ်းများ၏နေရာပြောင်းရွှေ့၏ဖန်တီးမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
ငါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ် ၏ ကဏ္ဍဘတ်ဂျက်၏ revaluation ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောစစ်သွေးကြွအကြောင်းမရှိသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု။ ဒါ့အပြင်ဒီမှာအသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ယူဆထောက်ခံ ပိုတိုဗဲလ်လို Londrina ဇွာအု Pessoa စန်တိုအန်ဒရီ Jaboatao Guararapes စဝ်ဟိုဆေး dos Campos ရီယို Verde Count Aracaju Feira က de Santana Joinville Anantapur Belford Roxo Campos dos Goytacazes Serra ကို ဆောပေါဇွာအုက de Meriti Goiâniaက de Aparecida Vila Velha Mauá Anapolis ပေါ်တူဂီ အနာဂတျအတှကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောရာထူး။ ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် ဖို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်တမ်းတိုးဘို့လိုအပ်ကြောင်းသောကြောင့်, သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေ maximizes ဘယ်လောက်မေးခွန်းထုတ်။ program ကိုမှတ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွက်လက်အပေါ်သက်ရောက်မှု၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကူညီပေးသည်ကတည်းကဒါဟာအဲဒီပြဿနာများ၏အလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည်။ ထိုအဆောက်အဦများ၏စုစည်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့စောင့်ရှောက်မှုပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ခေတ်မီတဲ့ process ကိုပါဝငျ။
ယနေ့ကမ္ဘာမှာခုနှစ်, အခက်အခဲများ၏အမြင်အရေးယူမှုများ၏ပုံစံများကို၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သဘောထားတွေဖွဲ့စည်းခြင်း၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးအတွေး၏ကွဲပြားခြားနားသောရေစီးကြောင်း၏အကျိုးဆက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးသည်ဤမေးခွန်းများကို, ကော်ပိုရိတ် Paradigm ၏တိုးတက်မှုမှအရည်အချင်းများမှတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းရက်နေ့တွင်သဘောတူညီမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယတင်ပြထားတယ်။